Sekureva kwevaongorori, Apple's Augmented Reality magirazi anosvika mu2020 | IPhone nhau
Ndiri kuseka nezvekuva muongorori. Ini ndinotenda nemoyo wese kuti chero munhu ari-up-to-date muApple world anokwanisa kutanga kuita fungidziro nezvekutengesa, kutangisa uye nevamwe, kubvira nekufamba kwenguva, vanosimbisa kuti vanogadzirisa zvavanofanotaura kuti vazvigadzirise kune zvitsva shanduko kana nhau dzakanangana kukambani. Iyi nharo inopokana padivi, Gene Munster anga ari wekutanga ku kuvhura zvavanofungidzira nezve zvingangoitika kusvika pamusika wekutanga Kuwedzera Kwechokwadi magirazi kubva kuApple. Sekureva kwaGene Muster, magirazi aya anosvika pamusika mu2020.
Sekureva kwaGene Munster, magirazi aya aigona kusvika pakati pegore ra2020 maererano nemafambiro azvinoitwa nekambani iyi mundima uye mushure mekutenga kambani yeSensoMotoric Instruments. Munster anoona chaicho chakawedzerwa sekusanganiswa kweiyo iPhone nechimwe chinhu chinosakara, semagirazi. Mutengo wekutengesa unenge ungangoita $ 1.300 uye chinodikanwa chegore rekutanga chaizove chakashomeka, anenge mamirioni matatu emayuniti achienzaniswa nemaPhones mazana maviri nemakumi maviri nemaviri ayo maererano nekambani Apple ichatengesa mugore rimwe chete.
Uye zvakare, anosimbisa kuti kutengesa kwe iPhone kucharamba kuchikwira kusvika 2019, zuva rinotengeswa kwechigadzirwa chemureza richazotanga kuderera richitsigira Apple Magirazi, sezvo muongorori atovabhabhatidza. Anotaura zvakare kuti pamusoro pemakore, Apple ichasimudza mutengo weAirPods kubva parizvino $ 159 kusvika $ 200, chimwe chinhu pakutanga chinoita senge chisingaite kunze kwekunge vakomana vanobva kuCupertino vawedzera nhau dzakakosha kwavari.
Sezvo Apple yakaratidza mune yekupedzisira ARKit kiyi yakakosha, pave paine akawanda masampuli atiri kuona chaizvo mazuva ese, masampuli anonongedza kwazvo, asi izvozvi vanosiya mibvunzo yakawanda mumheposemuenzaniso, isu tichakwanisa sei kusangana neichi chiitiko chinoitika pachiratidziri, kuburikidza nema keystrokes, nemutemo wekunze ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Sekureva kwevaongorori, magirazi eApple aAkawedzera Reality achasvika muna 2020